Oovimba be-DOGECOIN-Funda ukurhweba
Umsunguli we-Dogecoin ucebisa umanyano phakathi kwe-Ethereum kunye ne-DOGE
Umququzeleli we I-Dogecoin (i-DOGE) UBilly Markus uphawule ngezibonelelo ezinokubakho kumanyano phakathi kwe-Ethereum kunye nenethiwekhi yeDoge eya kuthi izise kwindalo yeDogecoin.
I-cryptocurrency yeshumi ngobukhulu ifumene ngaphezulu kwe-6,000% kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo, inyusa inqanaba le- $ 0.7310 ekuqaleni kukaMeyi. Nangona kunjalo, i-meme cryptocurrency ngoku ihlawula ngama-70% ukusuka ngalo lonke ixesha eliphakamileyo le- $ 0.7310.
Ngelixa umseki-ntsebenziswano uJackson Palmer egxeke imboni ye-cryptocurrency, esithi i-DOGE Ibe sisixhobo esilawulwa ziinqwelo ezinamandla, ” UBilly Markus wamkela umbono oqinisekileyo nge-cryptocurrency.
NgoLwesithathu, uMarkus uthathe i-Twitter ukuxoxa nge-asethi ye-crypto ancede wayiphuhlisa kunye nendlela yokuphucula iprojekthi "Ukudibanisa izinto ezimbini." Umququzeleli we-DOGE uqaphele ukuba:
"Zimbini izinto endikholelwa ukuba zinganceda iDogecoin: [Ukugqitywa] kwebhulorho ye-DOGE↔ETH, [kunye] namaqonga e-NFT (umz. I-Opensea) evumela ukuba ithokheni ye-DOGE-ETH isetyenziselwe ukuthenga.
Ukuthengwa kweNFT [kukwimfuno ephezulu] nge-crypto. Ukuvumela ukuthengwa kwe-DOGE kwee-NFTs kuyonyusa kakhulu ukusetyenziswa kwayo. ”
Isindululo sikaMarkus siza emva kweziphakamiso ezifanayo ezivela kwi-CEO ye-Ethereum uVitalik Buterin ngo-Septemba. Buterin wathi:
"Ngokwam, ndiyathemba ukuba i-DOGE ingatshintshela kwi-PoS kungekudala, mhlawumbi isebenzisa ikhowudi ye-Ethereum.
“Ndiyathemba ukuba abayi kuyirhoxisa i-5b / ngonyaka yokukhutshwa kwe-PoW yonyaka, endaweni yoko bayifaka kuhlobo oluthile lwe-DAO exhasa ngemali izinto zikarhulumente zehlabathi. Ingafanelana ne-Dogecoin yokunganyoluki.
Amanqanaba aphambili eDogecoin ukuba abukele-Okthobha 1
Ngexesha lokubuyiselwa okukhulu, okuye kwanceda intengiso ye-crypto ukuba ifumane i-8% ngaphezulu kweeyure ezingama-24 ezidlulileyo, uDogecoin ubonakala esokola ekuhlanganiseni nayiphi na irali ebalulekileyo. I-DOGE iyaqhubeka ngexabiso layo lokuthula ngenxa yokungabikho kwevolumu yokuthengisa.
Sibonile umzabalazo we-DOGE ngokuchasene ne- $ 0.2200 kwiiyure ezizayo, ezinokuthi zityhale ixabiso libuyele kumanqaku ayi- $ 0.2000. Ngaphandle kokuba ivolumu yokurhweba ityhalwa kwintengiso kungekudala, ikhefu elingaphezulu kwe- $ 0.2200- $ 0.2250 kubonakala ngathi akunakulindeleka.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.2200, i- $ 0.2250, kunye ne- $ 0.2400, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 02060, $ 0.2000, kunye ne- $ 0.1900.
Uhlaziyo lweNtengiso yeDogecoin: $ 28.3 billion
Ukuguqulwa kweDogecoin: 1.37%
Iindibano zeDogecoin njengoko iqhubeka nokuLawula iiTshathi zeNzululwazi yezeNtlalontle
I-Dogecoin (i-DOGE) Iyaqhubeka nokunyusa ubukho bayo beendaba zentlalo ukuze izame ukubuyela kwindawo yayo yangaphambili. Indlela yangoku ye-DOGE / izimvo kumaqonga ezentlalo anje nge-Twitter kunye neTikTok afikelele kumanqanaba abalulekileyo, kunye # DogeCointo1Dollar topping chart charts.
Imithombo yeendaba kwezentlalo ibe yinto ebaluleke kakhulu kwimali ekugcinwa kuyo imali ukusukela ekuqaleni kwexesha lenkomo, nelizise abatyali mali abaninzi. Ngaphezulu kweenyanga, uninzi lwabaphembeleli bemithombo yeendaba kwezentlalo batshontsha imali yabo abayigcinele eDogecoin ngokusekwe kubukrelekrele obujikeleze yona kunye neetweets zika-Elon Musk malunga nayo. Oko kwathethileyo, uninzi lwaba baphembeleli bafumene izabelo ezinkulu kutyalo-mali lwabo, emva kokunyukela kwi-ATH entsha ngoMeyi.
Abantu abadumileyo abanjengo-Elon Musk kunye noMark Cuban benze njengabaxhasi abaphambili be-DOGE. Ngelixa inkxaso kaMusk ye-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu ayisiyonto intsha, uMark Cuban mtsha ethekweni kwaye uqinisekile ukuba “Womelele” Imali yedijithali yentlawulo.
Usomashishini osisigidigidi uqinisekisile ukuba izimvo zakhe ayisiyiyo nje i-hype-asethi kodwa isekwe kubungqina. Uye waphawula ukuba i-95% yentengiso ye-crypto kwivenkile yakhe ethengisa izinto ingena kwi-DOGE. Okwangoku, iivenkile ezithengisa iimpahla zikaMaverick zaseCuba ngoku zamkela iBitcoin kunye neDOGE.
Ingqekembe yememe ngoku ijolise ekubuyiseni okungxamisekileyo kwe- $ 0.50 kwi-chain chain ngaphambi kokuphinda ubuyeke i-ATH yayo yangaphambili ye- $ 0.7390.
Amanqanaba aphambili eDogecoin ukuba abukele-Agasti 16
UDogecoin uyaqhubeka nokuthumela iinzuzo ezifanelekileyo njengoko iinkunzi zeenkomo zihlala zingenampembelelo kumkhankaso wazo wentengiso. Emva kokutsiba nge-18% izolo, i-DOGE ifikelele kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.3500 ngaphambi kokulungisa kancinci kwindawo eyi- $ 0.3325 namhlanje.
Oko kwathethi, i-cryptocurrency ngoku ibonisa ukubonakaliswa okugqithisileyo kwizixhobo zethu zobuchwephesha ze-4-iiyure ze-MACD, iphakamisa ukuba ulungiso olubukhali lunokuzimela. Naluphi na ukulungiswa kwexabiso ukusuka kwixabiso langoku kufuneka kugxothwe yi- $ 0.3000 yenkxaso yezengqondo ukuya kwinqanaba eliphezulu.
Nangona kunjalo, abahlalutyi abaninzi bakholelwa ukuba iimeko ezikhoyo zeemarike azikakulungeli ukulungiswa okwangoku. Iiyure ezizayo ziya kukhanyisa ngakumbi kwiinguqu zeDOGE.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.3500, i- $ 0.3750, kunye ne- $ 0.4000, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.3250, $ 0.3000, kunye ne- $ 0.2750.
Uhlaziyo lweNtengiso yeDogecoin: $ 44.8 billion
Ukuguqulwa kweDogecoin: 2.2%
tags Cryptocurrency, DOGE, I-DOGECOIN, iindaba, Uhlalutyo Technical
IDogecoin iRekhodi yokuThwala uMthamo wokuRhweba kwiKota yesiBini yowama-2021
Umthamo wokurhweba we I-Dogecoin (i-DOGE) ikhule nge-13 fold kwikota yesibini ye-2021, phantse ukurekhoda i-1 yezigidigidi zeedola kumthamo wokuthengisa wemihla ngemihla.
Ngokwengxelo ka-Coinbase echazwe yi-Business Insider, ivolumu yokuthengisa ye-DOGE iphindaphindwe ngaphezulu kwe-1,250% phakathi kuka-Epreli noJuni, nge-avareji ye- $ 995 yezigidi zeedola zemali ezitshintshisa izandla mihla le. Ngokomxholo, umndilili wokuthengisa ivolumu yeDogecoin kwiQ1 yayisisigidi se-74 sezigidi ngokomndilili.
I-DOGE iqale unyaka kwi- $ 0.004 kwaye yabhala ukuqala kokunyuka kwayo ekuqaleni kukaFebruwari, kulandela ukutsiba ngama-50% kumaxabiso xa umphathi wezigidigidi u-Elon Musk eqala ukukhankasela imali ye-meme kwi-Twitter. Inkunzi yenkomo enkulu ilandelwe emva kwephulo likaMusk kwaye yafikelela kwinqanaba elikhulu lokukhula kwamaxabiso nge-18,000% ukusukela oko kwaqala unyaka.
Ngelixa uninzi lwamalungu oluntu e-crypto ethe ukunyuka kweemeteor okubonwe eDogecoin kukususa iswekile ka-Twitter kaMusk, iBusiness Insider iqinisekisa ukuba intsebenzo yovuyo ye-cryptocurrency ibingazukwenzeka ngaphandle koluhlu olwandisiweyo lwe-DOGE kwi-exchange ephezulu ebonwe kwi-Q2.
Ngokwengxelo yeCoinbase, i-Q2 ikwabonile ukuthengisa ivolike yentsimbi ye-cryptocurrency nge-32% iyonke, irekhoda umndilili we-19 yezigidi zeedola. Ingxelo ikwaveze ukuba i-DOGE yenza ngaphezulu kwe-5% yevolumu ye-crypto edityanisiweyo kwi-Q2.
Amanqanaba aphambili eDogecoin ukuba abukele-nge-19 kaJulayi
UDogecoin uhlala ephantsi koxinzelelo lwe-bearish ephantsi koxinzelelo olumandla lwe- $ 0.2000 njengoko imakethi ye-crypto ihleli kumandla asecaleni. I-cryptocurrency yesibhozo ngobukhulu ehanjiswe ngaphezulu kwe- $ 0.2000 yokuchasana kulandela ukupheliswa kwe-Elon Musk-eyanyanzeliswayo kodwa yamkelwa kwangoko ziibhere kunye ne-50 SMA.
I-DOGE ifuna ikhefu ngaphezulu kwenqanaba le- $ 0.2000 ukuphinda umisele amandla afanelekileyo okunyusa umgangatho. Iiyure kunye neentsuku ezizayo ziya kubaluleka kakhulu kwimali yedijithali kunye nemarike ye-crypto ngokubanzi.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.2000, i- $ 0.2250, kunye ne- $ 0.2500, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.1650, $ 0.1500, kunye ne- $ 0.1400.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.29 zezigidi
Uhlaziyo lweNtengiso yeDogecoin: $ 23.4 billion
Ukuguqulwa kweDogecoin: 1.8%
tags Cryptocurrency, DOGE, I-DOGECOIN, iindaba
Ngaba iDogecoin (DOGE) lutyalomali oluhle lwexesha elide?
Ukuhlaziywa: 23 May 2021
Usenokwenza imali kwiDogecoin kwi2021!
Njengokuba eli nqaku libhalwa, i-DOGE ifumene kufutshane ne-80,000% okoko yadalwa, ngaphandle kokutsala okukhulu kutsha nje kwintengiso. Ixabiso liza kubuya kwakhona njengoko imarike iya phezulu.
Unokwenza imali kwiDogecoin kulo nyaka. Abatyalomali abaninzi benze imali eninzi kule ngqekembe ukusukela oko yadaliwayo kwaye uninzi ngakumbi luya kwenza imali kulo nyaka, nokuba sele befika.
Uninzi lwe-2021, i-bias iyonke kwi-DOGEUSD iyasebenza, kwaye ngelixa kuya kubakho izinto ezinkulu okanye ezincinci endleleni, imarike iya kubuyela ngokukhawuleza okanye kancinci. Ixabiso linokufikelela kwi-1.00 USD kwaye linokufikelela kwi-1.5 yeedola phambi kokuphela kwalo nyaka.
Kukho abathengisi be-crypto abasebenzayo abenza imali kwi-DOGEUSD ngokuyithenga xa ixesha le-RSI eli-14 lifikelela kummandla ogqithileyo ongaphantsi kwenqanaba lama-30. Bathengisa nengqekembe xa ifikelela kumhlaba ongaphezulu kwe-RSI 14 kwinqanaba lama-70 kwitshathi yemihla ngemihla, Ukurhola kwiinzuzo ezinkulu njengoko bekhwela ixabiso le-DOGE emazantsi.
Kananjalo, abatyali mali abathenga ukurhoxa okwangoku kwaye babambe kude kube sekupheleni kukaDisemba 2021, baya kuba neenzuzo ezintle zokubonisa umonde wabo.
Ukuphela kwe-2021, ndiza kulahla iDogecoin ngokupheleleyo kwaye ndiguqule inzuzo kuyo ibe yimali okanye isitokhwe.
Kodwa andizukuyibamba iDogecoin (DOGE) yexesha elide
Uninzi lwee-cryptocurrensets zikhwabanisa kuba azisebenzi ngeenjongo ezizodwa okanye zisombulule iingxaki ezizodwa. Nokuba ii-cryptos ezithile ekukholelwa ukuba zisombulula iingxaki zokwenyani zibaphoxile abatyali mali.
Inani leemali ebezisakuba ngamagama emizi kwaye zithembisa kakhulu kwiminyaka ethile edlulileyo ngoku ziphantse zaxabiseka. Ezinye iingqekembe / iithokheni zenze imali kwiminyaka eyadlulayo, kwaye balahlekelwa ngaphezulu kwe-90% yexabiso labo kwaye ababuyisanga nto ukusukela ngoko, nangona iicryptos zihlala zenyuka zaya phezulu ngo-2020 nango-2021.
Ndiza kunika imizekelo yezi ngqekembe kwelinye inqaku.
Ezinye iingcali zakha zacinga ukuba iingqekembe kwi-50 ephezulu okanye kwi-100 ephezulu kufuneka ithembeke. Nangona kunjalo, kwiinyanga ezili-14 ezidlulileyo, isixa semali esiqwalaselweyo saphuma kwelona liphezulu kwikhulu; kwaye ngelixa ezinye iingqekembe zingakhange zityhalelwe kude kakhulu, ezinye iingqekembe zatyhalelwa kude kakhulu, zaze zasondela kwelona liphezulu li-100.
Kutheni iDogecoin (DOGE) ayilotyalo-mali oluhle lwexesha elide
Akukho ndlela onokuyifanisa ngayo INJA kunye ne-ADA okanye i-ETH. Kukho umahluko omkhulu. Awunakuze uthelekise iDOGE ne-BTC. Ewe, ukuba elinye liyigugu, elinye liphepha.
Umzekelo, ngelixa i-BTC inomda / ubuninzi bonikezelo loyilo, malunga neeyunithi ezingama-10,000 zeDogecoin zenziwe ngomzuzu. Ukuba iDogecoin ifikelela kumgca wokumelana ne- $ 1.00, ixabiso layo lilonke liza kuba kumawaka ezi-129 zeebhiliyoni zeerandi, nto leyo eya kuyenza ukuba ibeyimali eyi-3 eyimali ye-crypto kwigama ngokwemakethi yentengiso.
Ndicaphula igqala, umqeqeshi oqeqeshiweyo kubarhwebi nakubatyalomali:
".. Ngokwam ndicinga ukuba i-DOGE yenye yezona ndawo zibi kakhulu nangona ikwindawo yesi-5 kwikhaphethi yentengiso. Yenziwe njengehlaya, ke ubuncinci ayisosikimu sePonzi. I-DOGE isekwe kwimeme kwaye ayinasizathu sokuba nexabiso ngaphandle kokuba abantu abancinci bacinga ukuba yinyani kwaye ibalulekile. Ukuba uthetha kuninzi lwabantu abakwi-20s yabo, i-DOGE kuphela kwe-crypto eyeyabo kuba konke kugqityiwe kwimidiya yoluntu.
U-Elon Musk unokuba nokuqaqamba ekubeni neenkampani zobuchwephesha kodwa ngokuqinisekileyo akanalo igunya lokutyala imali kwezinye iinkampani zabantu. Ebethetha kwaye ehlekisa nge-DOGE mva nje kodwa kutshanje ndiye ndafunda ukuba ebesebenza nabaphuhlisi be-DOGE ukusukela ngo-2019. Ngaba ayinakuba kukuhlekisa oko? Nokuba yeyiphi na indlela, andibathembi abantu abamangalelwayo (abaphindayo) kwii-tweets ezichaphazela amaxabiso esitokhwe senkampani yabo (iTesla). UTesla wayekile ukwamkela i-BTC njengentlawulo yeemoto zabo. Isazogcina utyalo-mali lwayo lwe-BTC enkulu nangona itshisa umbane omninzi. UMusk uyayamkela intlawulo ye-DOGE yesithuba X seprojekthi yakhe kodwa iDOGE ikwangqina lwengqekembe yomsebenzi etshisa namandla amaninzi… ” -U-Van K. Tharp, PhD
Nceda uvumele le nyani ingentla ukuba ingene.
Ndikwacaphula uSir John Hargrave we-Bitcoin Market Journal:
“Uthengela ntoni? Uthenga imali yehlaya eyehla ngexabiso (iiyunithi ezili-10,000 1.00 zedocoin zenziwe umzuzu ngamnye). Sele inentengiso ephezulu kunePolkadot, iCardano, kunye neAlgorand, ezizezona ziqonga zibhlokhi apho abantu bakha khona izinto. Ukuba ifika kwi- $ XNUMX, iya kudlula ingqekembe yeBinance, enegunya lotshintshiselwano olukhulu lwe-crypto emhlabeni.
Kum, kucacile ukuba iDogecoin liqamza, lixhokonxwa luhlobo olufanayo lwe-meme mania eqhube isitokhwe seGameStop. Ayilotyalo mali ngokwenene, kukungcakaza, kwaye ndiyakucaphukela ukungcakaza. Ke andizukuyichukumisa iDogecoin nge-leash yeenyawo ezili-10, ngenxa yeempawu ... ”
Dogecoin ukuwa ngo-2022
UDogecoin ugwetyelwe ukuba angabi naxabiso kwixa elizayo, aqale kwenye indawo ngo-2022, kwaye abatyali zimali abangayikhuphi imali ukuphela kwalo nyaka baya kuzisola kakhulu.
Ukubamba iingqekembe ixesha elide, musa ukubheja ukubila kwakho kwiithokheni ezingazisebenzisiyo iinjongo zabanye abantu. Kungcono ukunamathela kwii-cryptocurrensets ezimileyo kuvavanyo lwexesha.
tags Uqikelelo lwe-Cryptos, DOGE, I-DOGECOIN, DLULA
IDogecoin (DOGE) iyaqhubeka nokuNgena phakathi kwe $ 0.050 kunye ne- $ 0.070, Iithagethi eziPhakamileyo ze-0.072
Ixabiso le-DOGE ngoku liyenyuka kuluhlu oluhlanganisiweyo. Ixabiso le-crypto liyatshintsha phakathi kwe- $ 0.050 kunye ne-0.070 yeedola. Ngomhla wamashumi amathathu ananye kwinyanga yoKwindla ngo-Matshi, iinkunzi zeenkomo zazama ukwaphula i-31 yeedola kodwa zaphoswa. Kwicala elingaphezulu, ukuba iinkunzi zeenkomo ziye zaphula ukuxhathisa, i-uptrend iya kuqhubeka kwakhona. Ngaphandle koko, intshukumo ebotshelelwe kwinqanaba iya kuqhubeka ngaphakathi kuluhlu oluhlanganisiweyo.
Ixabiso le-DOGE likwinqanaba lama-57 le-Index ye-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba ingqekembe ikummandla ophakamileyo kwaye iyakwazi ukunyuka. Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zithambeka ngokuthe tye zibonisa intshukumo ebophelelayo.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, amaxabiso e-crypto ayatshintsha. Ixabiso le-DOGE lijamelene nokwaliwa kwinani le- $ 0.066. Imakethi iya kuwa ngalo lonke ixesha ixabiso livavanya ukunganyangeki. Ngeli xesha, ngo-Epreli 6 uptrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyisela kwakhona i-Fibonacci engama-50%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-DOGE iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci. Lelona liphezulu $ 0.072.
IDOGE / i-USD -4 Itshathi yeYure
I-DOGE ingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ingqekembe ikwisantya esiphezulu. Ingqekembe ine-crossover ye-bullish, Oko kukuthi, iintsuku ezingama-21 ze-SMA ziwela ngaphezulu kwe-50-day SMA. Oku kubonisa umqondiso wokunyusa. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihamba phezulu.
Ixabiso le-DOGE lisathengisa ngaphakathi kuluhlu oluhlanganisiweyo. Abathengi batyhala ixabiso ukuya kwinqanaba lokumelana. Imakethi iya kuphinda iqale kwakhona ngokufanelekileyo ukuba inqanaba lokumelana ne- $ 0.70 laphuliwe. I-DOGE ithengisa nge-0.061 yeedola ngexesha lokubhalwa.